२०० औ एग्रि प्यूमा आलू हार्वेस्टर एग्रीटिकेनिका २०१ 200 मा - Potatoes News
२०१th एग्रीिटेकिका २०१ 200 मा २०० औ AVR प्यूमा आलु फसल काट्ने
एग्रीटेक्निकाले एभीआर पुमाको नयाँ पिढीलाई प्रस्तुत गर्दछ: प्यूमा 3.। यो चार-प row्क्ति फसल काट्ने क्षेत्रलाई हिट गर्ने २०० औं पुमा हो। यो आजको शीर्ष शिकारीको रूपमा सुरू भएन।
वर्षौंको अवधिमा प्रविधिको महत्वपूर्ण विकास भयो किनकि सामान्यतया टेक्नोलोजीको सन्दर्भमा दुवै भित्र र बाहिर पनि हुन्छ।
अन्तर्वार्ताको अन्तर्गत, पुमा श्रृंखला को अनुसन्धान र प्रबन्धक र अवधारणा डिजाइनर, स्टीवन Paesschesoone पुमा को इतिहास को बारे मा बताउँछ।
यस चार-प row्क्ति स्व-संचालित खेतालाको अवधारणा कहिले सुरु भयो?
चार-प row्क्ति सेल्फ-प्रोपेल्ड हार्वेस्टर 1970 को दशकको हो।
एभीआरले आलु र बीट दुबै कटनी गर्ने अभिप्रायले एक स्वचालित चालित मोरेउ बीट फसल काट्ने ठाउँमा आलु खेती गर्ने बनायो किनकि आलुबाट बीटमा रूपान्तरण धेरै समय लाग्ने थियो।
हाम्रो मिशन कथनको एक हिस्साको रूपमा हाम्रा ग्राहकहरूलाई कम इनपुटको साथ बिक्रि योग्य फसलको उच्च प्रतिशत भण्डारण गर्न मद्दत गर्न, हामीले सम्भावित समाधानहरूमा दिमागमा काम गर्न थाले। धेरै समय नबित्दै हामी चार-प self्क्ति स्वयं-संचालित खेतालाको अवधारणाको साथ आएका छौं।
के चार-प row्क्ति काट्ने दुई प row्क्ति भन्दा महँगो छैन?
यो सत्य हो कि प्रारम्भिक लगानी केही अधिक छ तर अतिरिक्त लागत कुनै समय बिना नै फिर्ता आउँछ।
सबै भन्दा पहिले, प्यूमा अपरेटरको श्रम लागत / हेक्टर चार-प row्क्ति काताउनेसँग कम छ। थप रूपमा, कुनै बाली खेतमा सपाट हुँदैन र चार-प row्क्ति एकल आन्दोलनमा in मिटर चौडाईमा सबै कुरा काटेर समय बचत गर्दछ। बदलामा, यसले प्रति हेक्टर ईन्धन खपत पनि कटौती गर्दछ।
त्यसोभए तपाईले थोरै स्रोतहरू खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ठूलो उत्पादनको बदलामा।
यसको हालको स्वरुपमा पुमा रातारात निर्माण गरिएको थिएन। यसका पूर्ववर्तीहरू के हुन्?
त्यो सत्य हो। प्यूमा actually वास्तवमा हाम्रो सातौं चार-पंक्ति फसल काट्ने व्यक्ति हो। सुरुमा हामी सँगै मिलेर काम ग .्यौं मोरो, एक कम्पनी जसले बीट खेतालाहरू पनि बनायो।
अस्सीको दशकको अन्ततिर, हामीले डच कम्पनी रिकामको साथ मेसिनको विकास गर्न जारी राख्यौं। Riecam ईन्जिन र रातो फ्रेमको निर्माण गरियो जसमा AVR ले हार्भिक पेलाबाट पहिचानयोग्य, यसको फसल काट्ने काम गर्‍यो।
अर्को संस्करण थियो RWD300S, अर्को AVR / Riecam परियोजना।
अन्ततः यसको उत्तराधिकारी, सोलनम, १ 1997 XNUMX around को आसपास सुरू भयो। यो पहिलो श्रृंखला थियो जुन AVR द्वारा पूर्ण रूपमा डिजाइन र विकास गरिएको हो।
२०० In मा, हामीले सुरू गर्यौं प्यूमा श्रृंखला.
आजको लागि, त्यहाँ तीन पुस्ताहरू छन्: पुमा, प्यूमा + र प्यूमा the।पुमा र सोलनम बीचको प्रमुख भिन्नता भनेको सफाई च्यानलको चौडाई हो। सिभिंग जाभाहरूले अब बीचमा खाली स्थानको सट्टा रोलर्सको पूरा चौडाइ कभर गर्दछ। यो ठूलो फाइदा नाटकीय रूपमा सफाई क्षमता वृद्धि भयो।
संग प्यूमा + हामीले चेन ड्राईभबाट सिभिंग वेबहरूका लागि सिधा ड्राइभ प्रणालीमा स्विच गरेका छौं। र पछाडि टायरहरू 900 १०० मिमीको सट्टामा mm ०० मिमी चौंडा भएको छ।
२०० औं एआरआर प्यूमा आलु फसल काट्ने एग्रीटेकिका २०१ 200 2015 मा
को लागि AVR को प्यूमा 3As प्यूमा २.०, हामी अल्ट्राफ्लेक्स प्रकारको पछाडिको टायरको साथ ठूला अगाडि र रियर पाels्ग्राहरू चढ्यौं। स्टीयरिंग रेडियस दुबै अगाडि र पछाडि सुधार गरिएको थियो र हामीले भोल्भोले नयाँ स्टेज engine इन्जिनको साथसाथै नयाँ बॉश रेक्रोस्थ पम्प सेट पनि प्रयोग गर्‍यौं। सफाई क्षमता बढाउनको लागि दुबै रोलर टेबल र पिन्टल बेल्ट चौडा पारिएको छ। अद्वितीय Varioweb मोड्युल लचिलो सफाई सुनिश्चित गर्दछ।
किन कोही प्यूमा with सँग काम गर्न चाहन्छन्?
हामीले हाम्रो ग्राहकहरुलाई एक बलियो, भरपर्दो र उपयोगकर्ता मैत्री मेशीन प्रदान गर्न सक्षम हुन प्यूमा लाईन विकसित गरेका छौं। फसल काट्ने मौसममा, मेशिनले सञ्चालनमा रहनु पर्छ, अवधि। हाम्रा सबै डिजाइनहरूमा यो एक महत्वपूर्ण मापदण्ड हो। उदाहरणका लागि, यदि कुनै एक सेन्सर असफल हुन्छ वा केबलमा ब्रेक भएको खण्डमा, थुप्रै निर्मित ब्याकअप प्रणालीहरूले मेशिनलाई कामकाजका साथ राख्छन्।
अवधारणा एक केन्द्रीय चेसिस फ्रेममा आधारमा विकसित गरिएको थियो। बाली काट्ने काम गर्ने - मासु र हड्डीहरू जस्तो थियो - यसको माथि निर्माण गरिएको थियो। यो साधारण निर्माणले मेशिनलाई अझ बलियो र अधिक पहुँचयोग्य बनाउँदैन, तर सेवा-मैत्री पनि बनाउँछ। यस स्टीयरिंगलाई मेशिनलाई सञ्चालनमा राख्नु अघि कम्तिमा पनि कम्तिमा स्पष्टीकरण चाहिन्छ।
मैले महसुस गरे यो पममा the को फाइदाहरू हाइलाइट गर्ने व्यावासायिक जस्तो देखिन्छ तर यो वास्तवमै केही प्रतिक्रिया हो जुन हामीले वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूबाट पाइरहेका छौं (हाँस्छन्) जसले सुन्न सुस्पष्ट छ।
पुमा विकास गर्न कति व्यक्ति लिन्छन्?
प्यूमा अनुसन्धान र विकास विभागमा डिजाइन गरिएको हो, जहाँ म धेरै सहयोगीहरूसँगै अवधारणाको विकास गर्दछु। कलीग जोक क्याम्बी र उनको टीम सफ्टवेयर र अपरेटिंग प्रणालीको साथ पम्प असेंबलीको विकास गर्छन्; अन्य सहकर्मीहरूले मेकानिकल डिजाइन पूरा गर्छन्। प्रक्रियामा हाम्रो विक्रेताहरू पनि समावेश छन् जसले, अन्य मध्ये, प्रयोगकर्ता अनुभव साझा गर्दछ। खरीददारहरूले पार्टहरू अर्डर गर्छन्, उत्पादन विभागले मेशीन भेला गर्दछ। अन्त्यमा, फसल काट्ने व्यक्ति परीक्षण गरीन्छ र प्रमाणित हुन्छ र त्यसपछि ग्राहकलाई बुझाइन्छ। अर्को शब्दमा, हरेक विभाग संलग्न छ।
के त्यहाँ पमा तपाइँ साझेदारी गर्न चाहानुभएको कुनै रमाईलो उपाख्यानहरू छन्?
त्यहाँ तीन छन्, वास्तवमा:
मैले २R वर्षसम्म AVR का लागि काम गरें र यो मेरो क्यारियरमा डिजाइन गरिएको सातौं चार-प row्क्ति हो।
२०१ In मा, हामी खुशीले आश्चर्यचकित थियौं जब प्यूमा फ्लेमिश फिक्शन श्रृंखला 'ईगेन क्वेक' मा चित्रित हुन्छन्। हाम्रा धेरै ग्राहकहरूले पनि एपिसोड देखे र उनीहरूले हाम्रो गर्व साझा गरे।
यस तथ्यलाई कि २०० औं पुमाले यस बर्ष मैदानमा हिर्काइरहेको छ भन्ने कुरा बजारले यस चार-प row्क्ति खेतालामा रहेको विश्वासको संकेत हो।
निष्कर्ष यो हो कि मेरा साथीहरू र म खुशीले मार्केटको आवश्यकताहरू अनुसार यस मेसिनको विकास गरिरहनेछौं! SourceAVR bvba
टैग: AVR प्यूमा
आलु एक्सपो २०१ 2016 ले पहिलो फूड ट्रक शेफ प्रतियोगिता प्रस्तुत गर्दछ
आलू युरोप २०१ for को लागि तयारी भइरहेको छ
जापान फेस पोटाटो चिप्स छोटो